warkii.com » Osama bin Laden-kii Kubadda Cagta Oo Soo Laabtay – Akhriso Xogta Xiddiga Lagu Naanayso Osama bil Laden Ee Dhibaatada Loo Geystay
Osama bin Laden-kii Kubadda Cagta Oo Soo Laabtay – Akhriso Xogta Xiddiga Lagu Naanayso Osama bil Laden Ee Dhibaatada Loo Geystay
Da’yarka Ingiriiska ah ee Nile Rangers ayaa shaaciyey inuu hadda dib ugu soo laabtay la noolaanshaha hooyadii, kaddib markii “loola dhaqmay sidii uu yahay Osama bin Laden ka Kubadda cagta”.
Laacibkan hore weerarka ugaga ciyaari jiray Chelsea, ayaa toddobaadkii xoogsan jiray £10,000 Gini ayaa sheegay in ciyaaruhu ‘si fiican gacmaha ugala baxeen’ kaddib dhawr jeer oo uu sharciga dalka jabiyey.
Wuxuu qirtay inuu isagu waxyeellooyin is gaadhsiiyey, laakiin wuxuu baryayaa in la siiyo fursaddii ugu dambaysay ee kubadda cagta ee uu naftiisa ku muujin lahaa.
Rangers oo lix gool u dhaliyey xulka qaranka 19 jirrada England oo uu 11 kulan u saftay, waxa uu yidhi: “Aniga kubadda cagtu way iska kay nadiifisay, gacmaheedana way iga laabatay. Waxa la iila dhaqmay sidii aan ahayd Osama bin Laden ka kubadda cagta.”
Laacibkan ayay hadda da’diisu tahay 29 sannadood, markii ugu dambaysay ee uu kubbad ciyaarana waxay ahayd sannadkii 2018kii oo uu ka tirsanaa kooxda yar ee Southend United, wuxuu sheegay inuu dib ugu soo laabtay gurigooda oo uu muddo uga maqnaa sidii uu jidhkiisa taam uga dhigi lahaa.
Kooxo ay ku jiraan Rochdale iyo Oxford United ayaa muddada uu garoomada kasii maqnaa xidhoodho lasoo sameeyey, waxaanu hadda qirayaa inay ahaayeen go’aamo edeb darro ah oo uu qaatay, waxaanu yidhi: “Dhab ahaantii waxay ahaayeen go’aamo doqoniimo ah. Cidna kuma eedayn karayo laakiin aniga ayaa dhaawac is gaadhsiiyey.
“Waxaan rajaynayaa oo aan ku ducaystaa inaan heli doono fursaddii ugu dambaysay. Haddii aan helo, diyaar ayaan u noqonayaa inaan ka faa’iidaysto oo aan labada gacmoodba ku qabsado.”
Xirfadda Nile Rangers waxa uu dhaawacii ugu horreeyey gaadhay markii ay da’diisu ahayd 15 jir, xilligaas oo isaga oo ka tirsan da’yarta Southampton lagu xukumay 11 usbuuc oo xabsi ah maadaama isaga oo hubaysan uu jid-gooyo sameeyey, dad na uu si badheedh ah u dhacay.
Afar sannadood kaddib oo ahayd 2011, waxa isaga oo ka tirsan Newcastle lagu arkay qori, kaddibna waxa loo taxaabay jeelka.